काठमाण्डौमा कोरोनाबाट १ जनाको नि*धन, काठमाण्डौसहित देशका यी ठाउँमा फेरी भेटीए २०१ जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित ! – Online Nepal
काठमाण्डौमा कोरोनाबाट १ जनाको नि*धन, काठमाण्डौसहित देशका यी ठाउँमा फेरी भेटीए २०१ जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित !
नेपालमा बुधवार सोमवार थप २०१ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। योसँगै नेपालमा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या २,३०० पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। विकास देवकाटाले पछिल्लो २४ घण्टामा थप २०१ जनाको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको बताए। सङ्क्रमितमध्ये ९ जनाको निधन भइसकेको छ। नयाँ सङ्क्रमितमध्ये २२ जना महिला र १७९ जना पुरुष रहेका छन्।
त्यस्तै कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट थप एक जनाको निधन भएको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचाररत दोलखाका पुरूषको उपचारको क्रममा बुधबार निधन भएको हो। योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट निधन हुनेको संख्या ९ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
दोलखा भिमेश्वर नगरपालिका-२ का ७६ वर्षीय वृद्धको महाराजगन्जस्थित टिचिङ अस्पतालको गणेशमान भवनको आइसियूमा उपचार भइरहेको थियो।
Prevअभिनेत्री मनिषा कोइराला राजनीतिमा आउने !
Nextकाखे छोरी माइतीमा छाडेर कोरोना अस्पतालको नेतृत्व गर्दै डा शान्ति
सगरमाथा चीनमा पर्छ भन्दै चिनियाँ मिडियाले लेख्यो समाचार
४० नम्बरका लागि कक्षा १२ को अनलाइनबाट परीक्षा हुने